Sambava : Ankizilahy 13 taona maty nisavika fiara ka potraka
mardi, 03 janvier 2017 20:48
Ny 1 janoary 2017 tokony tamin’ny 7ora alina no nandalo tao Andampy, Kaominina Nosiarina ny fiara Peugeot 505 familial iray. Noho ny hamaroan’ny olona teo amin’ny lalam-pirenena dia tsy maintsy nandeha mora izy ka nandritra izany no nisarangotra tao aorian’ny fiara ilay ankizilahy 13 taona.
Araka ny fanazavana nomen’ny mpamily ilay fiara dia tsy nahita fa misy ankizy nisavika tao aorian’ny fiara nentiny fa nony tonga tany an-trano izy no nisy nandondona fa hoe : maty ilay ankizy nisavika ny fiara nentiny.
Tsy nino ny fanazavan’ilay mpamily ny fianakavian’ilay zaza maty.
Araka ny filazan’ireto fianakaviana dia ilay mpamily mihitsy no niteny tamin’ireo ankizy rehefa nijanona kely teto Andampy Nosiarina hoe : « midira ato anaty fiara ianareo rankizy izay mety ho tafiditra ato ». Efa feno ny fiara no nahatonga ity tovolahy kely ity nisavika tao aoriana tao raha ny fanazavan’ny havany hatrany.
Nambaran’ireto farany fa nampandre ny mpamily ireo tao anaty fiara rehefa teny ampandehanana fa misy ankizy latsaka fa tsy nijanona ilay fiara.
Nalevina androany tolakandro teo ilay zazalahy nipaohan’ny fahafatesana ity.
Side Affects Of Keflex [url=http://cialgeneri.com ]cialis online[/url] Cystitis Keflex Viagra En Allemand
Viagra Pastillas Acquistare Kamagra Clermont [url=http://orderviapills.com]online pharmacy[/url] Vyvanse Online Generic Prevacid Online
mercredi, 04 octobre 2017 15:09
Amoxil Bd [url=http://cialtobuy.com ]viagra cialis[/url] Viagra For Sale Online Ireland
Order Cheap Viagra Fas Best Price For Otc Nexium
Retin A Gel 0.1 Without Prescription generic cialis Order Cipla Drugs
vendredi, 15 septembre 2017 19:32
Donde Comprar Cialis Foro [url=http://lowpricevia.com]viagra[/url] cheap isotretinoin accutane with free shipping
lundi, 10 juillet 2017 10:17